Nhengo dzeAlphabet Inc. nhasi, mutengo weGOOG iri paIndaneti ikozvino, inowanidza mitengo yeAlphabet Inc..
GOOG = 2 850.41 US dhora
-25.12 USD (-0.881%)
The stock quote stock mutengo ine avhareji kukosha pazuva. Mutengo wemasheya kubva ku Alphabet Inc. mu US dhora kubva kune dheti yakavimbika. Ichi chirevo chemutengo wemari yemasheya. 1 stock of Alphabet Inc. yatove yakachipa ne 25.12 US dhora. Kune 1 stock of Alphabet Inc. ikozvino unofanirwa kupa 2 850.41 stock ye US dhora. I Alphabet Inc. mwero wakadzikira kubva pa US dhora ne -87 mazana emakumi muzana muzana.
Alphabet Inc. inyanzvi yekambani inayo US dhora
Mwedzi mitatu yadarika, Alphabet Inc. inogona kutengwa 2 895.50 US dhora. Mwedzi mitanhatu yapfuura, Alphabet Inc. inogona kutengeswa 2 451.76 US dhora. Gore rapfuura, Alphabet Inc. inogona kuchinjaniswa kwe 1 784.13 stock ye US dhora. -2.46% pavhiki - shanduko mumutengo wemasheya we Alphabet Inc.. -4.14% pamwedzi - shanduko mumutengo wemasheya we Alphabet Inc.. 59.76% - shanduko mumutengo wemitengo we Alphabet Inc. mu US dhora yeUkraine pagore.
Stock quotes Alphabet Inc. US dhora
GOOG Kuti US dhora (USD)
1 GOOG 2 850.41 US dhora
5 GOOG 14 252.05 US dhora
10 GOOG 28 504.10 US dhora
25 GOOG 71 260.25 US dhora
50 GOOG 142 520.50 US dhora
100 GOOG 285 041 US dhora
250 GOOG 712 602.50 US dhora
500 GOOG 1 425 205 US dhora
Unogona kutenga 28 504.10 US dhora ye 10 stock ye Alphabet Inc.. Stock quote converter nhasi inopa 71 260.25 US dhora ye 25 stock of Alphabet Inc.. Unogona kutenga 50 stock of Alphabet Inc. ye 142 520.50 US dhora. Nhasi 285 041 USD = 100 stock ye GOOG. Iwe unogona kutengesa 712 602.50 US dhora ye 250 stock ye Alphabet Inc.. Kana iwe uine 1 425 205 US dhora, ipapo mu British Virgin Islands vanogona kutengeswa kwe 500 stock of Alphabet Inc..
GOOG mutengo wemari yakaitika
3 Zvita 2021, 1 stock ye Alphabet Inc. inodhura 2 850.410 US dhora. Alphabet Inc. mu US dhora pa 2 Zvita 2021 yakaenzana ne 2 875.530 US dhora. 1 Zvita 2021, 1 stock ye Alphabet Inc. inodhura 2 832.360 US dhora. 30 Mbudzi 2021, 1 stock ye Alphabet Inc. = 2 849.040 US dhora. 29 Mbudzi 2021, 1 stock ye Alphabet Inc. inodhura 2 922.280 US dhora.
Chimwe chikamu cheAlphabet Inc. nhasi chinomira pa 2 850.41 $. Mutengo weGOOG wehove washanduka kusvika -0.881% kana -25.12 USD kubvira musi wekupedzisira wekutengesa. Iwe unogona kutenga zvikamu zana zveAlphabet Inc. zve 285 041 US dhora kana kutengesa 50 mazana eGOOG ye 142 520.50 US dhora.
Alphabet Inc inopa mukana wekutengesa zvinhu zvekombiyuta uye zvinyorwa. Yakawanda yezvikwata zvinosanganisira Search, Android, YouTube, Apps, Maps & Ads.